Hiiraan Online News About Somalia » Deg deg ah: Maamulka Soomaaliland oo albaabaha u xeray Garoonkii Diyuurahada ka
Deg deg ah: Maamulka Soomaaliland oo albaabaha u xeray Garoonkii Diyuurahada ka
Maamulka Somaliland ayaa shaaciyay in uu albaabada u laabay xafiis ay lahayd shirkad magaceeda loosoo gaabiyo SRM oo la sheegay in ay maamulkii hore ee talada ka dagay qandaraas uu ku siiyay amaanka madaaradda maamulkaasi Somaliland.
Hanta dhawraha guud ee Somaliland Axmed Yuusuf Dirir ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in xafiiskii shirkadaasi la xidhay isaga oo sheegay in sharcigu awood u siisay inay baadhaan isla markaana albaabada u xidhaan xafiiska shirkaddan, waxii kusoo kordhana ay dib warbaahinta ugu sheegi donaan.
“Horta in xafiis dakhli qabanaya aanu xidhno, waa shaqadayada maalinlaha ah ee aanu qaranka u hayno, tanina wuxuun bay kamid tahay shaqadaas. Wey jirtaa shalay (dorraad) in aanu tagnay xafiiska shirkadda madaarada Somaliland”
Hanta dhawraha guud ee Somaliland Axmed Yuusuf Dirir oo sii hadlayay ayaa yiri.
sharciga ayaa noo fasaxaaya, hadduu yahay kan baarlamaanku ansixiyey ee takaaliifta madarada iyo haddii uu yahay ka mid aqbalaya xeerka hantidhawrka guud ee qaranka, markaa annaga oo waajibaadkayagii dastuuriga ahaa fushanayna, ayaanu shaqadaas galnay, waanay jirtaa markaanu halkaas tagnay inaanu xidhnay xafiiskii Finance-ka maaliyadda) iyo xafiiskii manager-ka (maamulka) oo labaduba ay Dubai ku maqan yihiin, markaa intay imanayaan inay noo sii xidhnaadaan, si baadhistayaduna usii socoto, dib eyey kasoo bixi doonaan markaanu shaqadayadaa qabsano.”
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in hanti dhawruhu xidhay xafiis kale oo ay shirkadani ku leedahay madaarka gudihiisa kaas oo qaban jiray lacagta duulista, arintaasi oo muran badan maanta dhalisay.